बायर्नलाई हराउँदै टोटेनहमले जित्यो औडी कप, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एजेन्सी । प्रिमियर लिग क्लब टोटेनहमले औडी कपको उपाधि उचालेको छ । बुधबार राति भएको खेलमा जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै टोटेनहमले उपाधि उचालेको हो ।
निर्धारित समयको खेल २–२ गोलको बराबरीमा सकिएपछि निर्णय पेनाल्टी सुटआउटमा गरिएको थियो । खेलको १९ औं मिनेटमा ईरिक लामेलाको गोलबाट टोटेनहमले अग्रता लिएको थियो । ५९ औं मिनेटमा क्रिस्टियन एरिक्सनले टोटेनहमको अग्रता दोब्बर पारे ।
६१ औ मिनेटमा जान फिएद अर्पले गोल गर्दै बायर्नलाई खेलमा फर्काउने कोशिश गरे । ८१ औ मिनेटमा अल्फान्सो डेविसले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए । पेनाल्टी सुटआउटमा बायर्नलाई ६–५ ले पराजित गर्दै टोटेनहमले उपाधि जित्न सफल भएको हो।